Dibadbax looga soo horjeedo Hindisaha Xil Ka Qaadista Madaxweyne Farmaajo oo Muqdisho ka dhacay – Kalfadhi
Boqolaal qof dibadbax ay ka qeyb-galeen, oo looga soo horjeedo Hindisaha Xil Ka Qaadista Madaxweyne Farmaajo, ayaa saaka ka dhacay Wadada Maka al-Mukaramah ee magaalada Muqdisho. Dibadbaxan ma sii waarin, oo saacado kooban kadib waa uu soo dhamaaday.
Laakiin, waxay dibadbaxayaashu socdaal ku soo mareen intaay dhirirsan tahay wadada Maka al-Mukaramah. Ugu dambeyntii, waxay isugu tageenFagaaraha Daljirka Daahosoon iyo Isgoyska KM4, oo ay Ciidanka Ammaanku u xireen dartood, intii ay banana-baxayeen.
Dibadbaxayaashu waxay ku dhawaaqayeen ereyo ay Soomaalida dibadbaxdaa inta badan isticmaalaan, oo ah “Doolar Qaate Dooni Meyno”. Hase ahaatee, waxay kuwani intaas ku darayeen ineysan dooneyn “Mooshin”. Waxay kor ululayeen caleemo qoyan, oo ay gacmaha ku haysteen.
Sida qaar ka mid ah, iyagoon isla heleyn, ay ku buuqayeenwaxay aaminsan yihiin in hindisaha, ay qaar ka mid ah Xildhibaannada Goluhu ku doonayaan in xilka looga qaado Madaxweyne Farmaajo, uu yahay midaan imaan waqti loo baahnaa.
Si rasmiya looma kala oga inuu dibadbuxu iskiis u bilowday, in la soo abaabulay iyo cidda soo abaabushay, balse sida warar uu helay Kalfadhi ay sheegayaan waxaa dibaxbaxa ka shaqeeyey Maamulka GobolkaBanaadir, hase ahaatee ma tagin goobaha dibadbaxa, kamana uusan hadlin.